माछापालनका लागि द्वन्द्वपीडितलाई अनुदान – NewsAgro.com
माछापालनका लागि द्वन्द्वपीडितलाई अनुदान
April 14, 2014 December 16, 2016 newsagro0Comments
कञ्चनपुर, १ वैशाख / जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरले माछापालनका लागि कञ्चनपुरका द्वन्द्वपीडित समुदायलाई अनुदान दिने भएको छ । कृष्णपुरका द्वन्द्वपीडित समुदायलाई समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू. आठ लाख अनुदान दिने भएको हो ।
जिविसले कृष्णपुरका पीडितका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ का लागि रू. आठ लाख विनियोजन गरेको कञ्चनपुरका स्थानीय विकास अधिकारी लक्ष्मण ढकालले जानकारी दिए । द्वन्द्वपीडितलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि जिविसले सो रकम विनियोजन गरेको उनले बताए ।
‘पीडितहरूलाई माछापालनका लागि रकम दिइनेछ, उनीहरूले रकमअनुसारको माछापालन गर्नुपर्ने छ । पीडितहरूलाई व्यवसाय गर्न कठिन भएका कारण जिविसले उक्त रकम दिन लागेको हो ,’ उनले भने । यसैगरी समितिले द्वन्द्वका बेला क्षतिग्रस्त जिविस भवन मर्मतका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरेको छ । जिल्ला विकास समितिको भवन मर्मतका लागि रू.पाँच लाख विनियोजन गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी ढकालले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा जिविसको क्षतिग्रस्त भवन मर्मत हुने उनको भनाइ छ ।
← १९ सय उन्नतजातकाकुखुरा वितरण
उपत्यकामा ८ सय डेरी उद्योग गैर कानूनी →
ब्रान्ड मात्रै जनकपुर